लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वलीले ‘मेरो पोइ खोई?’ भन्दै घरमा छिरेर कुटपिट गरेपछि …. | Chitrawan Khabar
लुम्बिनीकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री वलीले ‘मेरो पोइ खोई?’ भन्दै घरमा छिरेर कुटपिट गरेपछि ….
दाङ, ३१ जेठ : कहिले एमालेबाट माओवादीमा गएर त कहिले माओवादीबाट एमाले आएर गतवर्ष देखि नै चर्चामा रहेकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमला वली आज अर्काको घर भित्र पसेर मेरो पोइ खोइ? भन्दै चर्चामा आएकी छिन् ।
दाङका एक पुरुष सँग प्रेम सम्बन्धमा रहेकी वलीले आज विहान सुरक्षा गार्ड सहित एकराजको घरमा प्रवेश गरेर ‘मेरो प्रेमी खोई ?’ भन्दै श्रीमती र छोरीलाई कुटपिट गरेकी थिइन् । मन्त्रीले घरमा आएर आतंक मच्चाएपछि स्थानीयबासीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । प्रहरीले वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बिहान करिब ८ बजे ती महिलालाई राज्यमन्त्री वलीले हातपात गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । ‘एक घरमा गएर महिलालाई हातपात गरेपछि उहाँलाई अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा राखेका छौं,’ प्रहरी निरीक्षक स्वारले भने, ‘घटनाबारे बुझिरहेका छौं ।’
वलीले एकराजकी श्रीमतीलाई कुटपिट गरेकी छन् । गतवर्ष वलीले एकराजले चुम्बन गर्दै गरेको फोटो फेसबुकको स्टोरीमा हालेकी थिइन् ।